Fikarohana momba ny firaisana Tranom-pitaovam-pandrindrana an'i Giver Oliver Goldsmith | Neil Simon - Fikarohana momba ny firaisana amin'ny vatana
Neil Simon dia iray amin'ireo mpilalao sarimihetsika mahomby indrindra amin'ny vanim-potoana ankehitriny. Ny asany, izay natao tao amin'ny sarimihetsika maro, dia mifantoka amin'ny fifandraisana amin'ny olona isan'andro. Fantany ny fomba fijeriny sy ny fahatakarany ny fihetsiky ny olombelona.
Tao anatin'ny fivoriana niaraka tamin'i Kevin Ryerson, nanamafy i Ahtun Re fa i Neil dia Oliver Goldsmith ao anatin'izao tontolo izao. Goldsmith nanoratra The Vicar of Wakefield, izay iray amin'ireo tantara malaza indrindra tamin'ny taona 18IX. Ny mpanefy volamena, ao amin'ny asa sorany, dia fantatra amin'ny endrika asehony ny hatsaram-panahin'ny olombelona, ​​izay toa maneho ny fitantaran'i Neil Simon amin'ny fomba manintona ny olona.
Fitoviana ara-batana: Oliver Goldsmith sy Neil Simon dia mizara endri-javatra ara-batana, anisan'izany ny lohan'ny boribory. Kitiho ny sary mba hanitarana azy.
Ny fiainana taloha talenta: Ny talenta novolavolainan'i Goldsmith dia nanazava ny asan'i Neil Simon.
Fiovàna ny maha-olona sy ny finoana: Teraka tany Irlandy i Oliver Goldsmith, izay mpitondra fivavahana kristianina. Mifanohitra amin'izany, i Neil Simon dia teraka tao amin'ny Bronx, New York ho an'ny fianakaviana jiosy.